Mashruuca Sifeynta Real Madrid – Hazard Iyo Zidane Baa Ugu Horreeya – Garsoore Sports
Mashruuca Sifeynta Real…
Real Madrid ayaa la filayaa inay isbedello waa weyn sameyso xagaagan kaddib markii laga reebay Champions League-ga mar kale, iyadoo tababare Zinedine Zidane iyo garabka kooxda ee Eden Hazard ay labadoodaba wajahayaan mustaqbal aan la hubin.
Guuldarro 2-0 ah oo ka soo gaartay Chelsea, oo ay uga hartay tartanka Champions league-ga ayaa la micno ah in Real ay keliya u tartamayso horyaalka La Liga. Waxayse weli miiska kala-sarreynta kaga dambeeyaan Atletico Madrid iyagoo Barcelona ay isku dhibco yihiin , taasoo dad badani ay u arkaan inay ugu cadcad yihiin inay kor u qaadaan koobkan.
Sida laga soo xigtay Marca, madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez ayaa isku diyaarinaya inuu sameeyo isbedel weyn xagaagan, oo ay ku jiraan ciyaartoyda iyo shaqaalaha tababarka ee kooxda.
Laga bilaabo Zidane, wuxuu durbaba kala hadlay Perez mustaqbalkiisa inkastoo aan laga gaarin go’aanka ugu dambeeya.
Maadaama ay seegeen Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann iyo xitaa Jose Mourinho, Real Madrid waxaa lagu qasbayaa inay u weecato xulashooyin kale.
Tababarayaasha koox la’aanta ah ee Joachim Low iyo Massimiliano Allegri ayaa labadoodaba la xusay inay yihiin musharixiin macquul ah, laakiin xulashada ugu macquulsan ayaa ah in halyeeyga kooxda ee Raul Gonzalez laga soo dalacsiiyo akadeemiyada.
Perez ayaa sidoo kale qorsheynaya isbedelo jumlo ah oo lagu sameeyo cayaartooyda kooxda.
Seefta ugu horreeysa waxay ku dhici kartaa Eden Hazard, kaasoo ‘aanan qeyb dambe ka ahaaneeyn mustaqbalka kooxda’ ee garoonka Bernabeu – kaddib markii la arkay isagoo la qoslaya cayaartooyda kooxdiisii hore ee Chelsea kaddib guuldaradii xanuunka badneyd ee xalay soo gaaray Blaugrana.
Hazard waxaa raacaya Marcelo iyo Isco oo labadaba albaabka laga baxo loosii furay, laakiin dhammaan seddexdan in la iibiyo waxaa loo arkaa inay ‘adag tahay’ waxaana taa loo sababeeynayaa baaxadda qandaraasyada ay kooxda kula jiraan.
Waxa kale oo jira qorshayaal kale oo lagu fasaxayo qaar ka mid ah ciyaartooyda amaahda ku maqan.
Gareth Bale, Luka Jovic, Brahim Diaz iyo Dani Ceballos ayaa dhamaantood iib ah, iyadoo Martin Odegaard ay u badan tahay inuu dib usoo laabto haddii Zidane uu sii ahaado tababaraha kooxda.
Takefusa Kubo iyo Reinier Jesus ayaa iyagana la siin doonaa waqti dheeri ah oo ay isku muujiyaan.
Kaddib Markii ay iska fadhiisteen suuqii xagaagii la soo dhaafay, Real madrid waxay u muuqataa inay markan diyaar u tahay inay dhaqdhaqaaq ka sameeyso suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee furmaya 9ka bisha June.